Sunday, December 21, 2014 2:52 आईतवार २०७१ पुस ६
2007/03/25	Source: अनलाइन खवर	URL: www.onlinekhabar.com:80/details3.php?article_id=2094
नेपाल सरकारले अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ : के.पी. सिटौला, अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली संघ, दक्षिण कोरिया (अन्तरवार्ता)
के.पी. सिटौला विगत १५ बर्षदेखि दक्षिण कोरियामा ब्यवसाय संचालन गर्दै आउनुभएको छ । पर्यटन ब्यवसायमा आवद्ध सिटौला, गैरआवासिय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । सिउलमा ट्राभल एजेन्सी संचालन गर्ने एकमात्र नैपालीकौ रुपमा चिनिनुभएका सिटौलाले नेपाल पर्यटन वोर्डको कोरियास्थीति जनसम्पर्क प्रतिनिधिको भूमीकापनि निर्वाह गरिहनुभएको छ । नेपाल भर्खरै कोरियाको श्रमस्रोत मुलुकको रुपमा सुचिकृत भएको र इपीएस प्रणालीवाट कामदार पठाउन पाउने भएपछि नेपाल सरकारले कोरियामा आफ्नो आवासीय दुतावास समेत खोलेको छ । यसै सन्दर्भमा इपीएस प्रणाली र यसवाट नेपाली कामदारले पाउने सुविधाका विषयमा केन्द्रीत रहेर अनलाइनखबरका लागि धर्मराज भुसालले सिटौलासंग गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोरियामा अहिले विभिन्न तरिकाले पुगेका नेपाली कामदारहरु रहेका छन् । शुरु-शुरुमा पर्यटक भिसामै त्यहाँ पुगेर वसेका नेपालीहरुपनि छन् । पछिल्लो समयमा कोरियाले नेपालीहरुलाई प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा लिन थालेपछि त्यहाँ थुप्रै नेपाली पुगेका छन् । खासगरि नेपाली कामदार त्यहाँ औद्योगीक काममदारको रुपमा रहेका छन् । र, कोरियालीहरु नेपाली कामदारलाई इमान्दार र मेहेनतिको रुपमा लिन्छन् । कोरियामा नेपालीहरु जाने क्रम कसरी शुरुभयो ?
कोरियाले नेपालीहरुलाई औपचारिक रुपमा कामदारको रुपमा लान थालेको १९९४ देखिमात्र हो । त्यो भन्दा अगाडी १९९१ बाटपनि भ्रमण भिसामा त्यहाँ पुग्ने नेपालीहरु छन् । १९९२ मा त्यहाँको सरकारले पर्यटक भिसामा पुगेर वसेका सवैलाई भिसा दिने निर्णय गर्यौ । ६/६ महिनाका दरलै भिसाको अवधि थप्दै गयो । १९९४ वाट उनीहरुलाई कामदारको आवश्यकता पर्यो र नेपालीहरुलाई कामदारको रुपमा लिनथाल्यो । सन २००४ अगष्टदेखि कोरियाले इपीएस सिस्टमको शुरुवात गर्यो । प्रशिक्षार्थीको रुपमा कामदार लैजाँदा समस्या उत्पन्न भएपछि इपीएस शुरु गरिएको हो । अहिले भर्खरैमात्र नेपाल इपीएस प्रणालीवाट कामदार पठाउने सुचिमा परेको छ । इपीएस सिस्टमको अन्तर्वस्तु के हो ? यो औद्योगिक प्रशिक्षार्थीभन्दा कति भिन्न हो ?
प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा लैजाँदा सरकारले नियन्त्रण नगर्ने र निजीक्षेत्रका म्यानपावर ब्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ कमिसन खाने गरे । जसले गर्दा पैसा असुलगर्न पनि कामदारहरु तोकिएको समयभन्दा वढि वस्ने अवस्था आयो । यसले कोरियामा पनि समस्या भयो । त्यसैले सरकारले २००४ अगष्टवाट परिक्षणका रुपमा कामदार अनुमति ब्यवस्था इपीएसको शुरुवात गर्यो । 'इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम' औद्योगिक प्रशिक्षार्थीभन्दा माथी तर वर्क परमिटभन्दा तलको संयन्त्र हो । यसमा म्यानपावर कम्पनीलाई कहिंपनि पहुँच दिइएको हुँदैन् । सवैकाम दुइदेशका सरकारी निकायले गर्छन् । कामदारको छनौंटपनि नेपाल सरकारले सिधै गर्छ र कोरियावाट कामदारको माग पनि त्यहाँको सरकारमार्फत नै हुन्छ । यो कन्सेप्टको सुरुवातनै निजीक्षेत्रका म्यानपावरलाई पहिलेकोजस्तो अधिकार नदिने हो । यो प्रकृयामा कहिंपनि म्यानपावरले स्थान पाउँदैनन् । यसले कम से कम कामदारले वढि पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र कामदारले वढि आम्दानी गर्न सक्छन् ।
यो प्रकृया त यसअघि भन्दापनि सरकार नियन्त्रित भयो होइन र ?
हो । निजीक्षेत्रका म्यानपावरलाई जिम्मा दिंदा कामदारनै ठगिने अवस्था आएपछि कोरियामा रहेका मानवअधिकार वादी संस्थाहरुले चर्को विरोध गरे । त्यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकार-सरकारविचनै प्रतक्ष्य सम्वन्ध हुनेगरि संयन्त्रको विकाश गरिएको हो । कोरियाका कम्पनीले आफुलाई चाहिने कामदार कुन मुलुकवाट ल्याउन चाहेको हो, सो वारे सरकारसंग माग गरेपछि सरकारले त्यसको जानकारी सम्वन्धीत देशको सरकारलाई दिन्छ । तर प्रशिक्षार्थी पठाउँदा कोरियाको घरेलु तथा साना उद्योग संघले जिम्मा पाएको थियो । अव उनीहरुको भूमीका छैन् ।
यो प्रणालीवाट प्रत्येक बर्ष कति नेपाली कोरिया जाने अवसर पाउँछन् ?
कोरिया सरकारले पहिलेजस्तो कोटा दिने भन्ने हुँदैन् । नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनीहरुसंग आफ्नो देशका कामदारका विषयमा मार्केटिङ र लविङ गर्न सक्नुपर्छ । त्यही आधारमा त्यहाँका कम्पनीले सरकारसंग नेपाली कामदारको लागि माग गर्छन । त्यसपछिमात्र नेपालले कामदार पठाउनसक्छ । नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारको डिमाण्ड वढाउन सकेन भने यो अवसर अरु मुलुकले पाउन सक्छन् । नेपालजस्तै इपीएसमा सुचिकृत १६ मुलुक छन भन्ने वुझेर आफु प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्छ । कोरियाले २००७ का लागि जम्मा १ लाख १० हजार विदेशी कामदार भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ६० हजार कोरियन मुलकै विदेशी कामदार पर्छन् । वाँकी ५० हजार कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नेहो । ५० हजारमध्ये कति कोटा नेपालले ल्याउनसक्छ त्यो नेपाल सरकारको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ । यो प्रणाली अन्तर्गत गएका नेपाली कामदारले पाउने थप सुविधा वा परिवर्तन कस्तो हुनेछ ?
मुख्य कुरा यो प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी सामेल नहुने र सरकारले सिधा छनौट गर्ने भएकाले नेपाली कामदार सस्तो मुल्यमा कोरिया जाने अवसर सरकारले मिलाउनुपर्छ । यसअघि प्रशिक्षार्थीको रुपमा जाँदा प्रति कामदारले ४/६ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन्, जसलाई ऋणतिर्न मात्र दुइवर्ष लाग्छ । यसवाट त्यो अवस्था टर्यो भनेपनि नेपाली कामदारले धेरै राहत पाउनेछन् । अर्कोकुरा, नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा सरकारको डिलिङमा पनि भर्रपर्छ । सो प्रणालीमा अरु देशका कामदारले पाउने भनि सरकारले तोकेवमोजीमको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली कामदारलेपनि पाउँछन् । अन्य सेवा सुविधाको विषयमा संझौतामा हस्ताक्षर भएपछिमात्र भन्न सकिनेछ । बल त अहिले नेपाल सरकारको पक्षमा आएको देखियो । अव सरकारले गर्नुपर्ने प्रारम्भीक तयारी के-के हुन ?
खासमा अहिले इपीएस सिस्टम लागु भइसकेको छैन् । कोरियाले सो सिस्टममा नेपाल पनि पर्नेभयो मात्र भनेको हो । आफ्नो अनुकुलता अनुसारको संझौतापत्र वनाएर नेपाल सरकारले कामको शुरुवात गर्नुपर्छ । आफ्नो देश र कामदारलाई फाइदा पुग्नेखाले संझौतापत्र सरकारले वनाउनु पर्छ । कारियाली निति अनुसार विदेशी कामदारलाई उद्योग, कृषि र माछापालन जस्ता क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । नेपाली कामदारले पनि यीनै क्षेत्रमा काम पाउने हुन । नेपाली कामदारप्रति कोरियाली रोजगारदाताको दृष्टिकोण र नेपाली कामदारको छवी कस्तो रहेको छ ?
नेपालीहरुले कडा मेहनेत गर्नसक्ने इमान्दार कामदारको रुपमा आफ्नो छवी वनाएका छन् । नेपाली कामदारले काम गरिसकेका उद्योगमा हतपत अरु देशका कामदार लिन खोज्दैनन् । रहन-सहन र भाषामा पनि कोरियालीसंग नेपालीहरु छिटो घुलमिल हुनसक्छन् । त्यो छवीलाई कायम राख्दै सरकारले मार्केटिङ गर्न सक्यो भने संभावना र अवसर धेरैछन् । वार्षीक हजारौंले रोजगारी पाउन सक्छन् । यो प्रणालीमा कामदारले पाउने पारिश्रमीकमा कुनै अन्तर छ ?
प्रशिक्षार्थीको रुपमा जाँदा भन्दा खासै फरक छैन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले तोकेजति हुन्छ जो मासिक आठसय डलर जति हुन्छ । त्यसवाहेक अतिरिक्त समय र कम्पनी नियमअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण हुन्छ । त्यहाँका नियम अनुसार कामदारले दिनको आठघण्टाको दरले हप्ताको ४० घण्टामात्र काम गरेपुग्छ । यसमा खास अन्तर के छ भने पहिले तीनबर्ष सम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने यो प्रणालीमा हरेक वर्ष कामदार र रोजगारदाता विच संझौता हुन्छ जसले गर्दा अपठ्यारो पर्दा कम्पनी परिवर्तनपनि गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले भर्खरै कोरियामा आवासिय दुतावास पनि खोलको छ । दुतावासले तत्काल के-के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? पहिलो कुरा त संझौतापत्र तयार पार्नुपर्नै अवस्था छ जसमा हस्ताक्षर नभइ काम अगाडी वढन सक्दैन् । त्यसपछि दुतावासले प्रभावकारी मार्कैटिङ गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली कामदारको माग कोरियाली कम्पनीलै वढाउन सकुन । कोरियाको मानेमा नेपाली कामदारको सम्पूर्ण जिम्मा दुतावासमाथी आएकौ छ । अन्य दैशको दुतावासले भन्दा कोरियाको दुतावासले कामदारको हितमा खटनुपर्नै अवस्था छ । यस वाहेक दुइदेशविचको ब्यापारिक तथा कुटनितिक सम्वन्धको काम त भइनै रहन्छ । साथै पर्यटन प्रबर्द्धन तथा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता कार्यहरु झन महत्वपूर्ण छन् । अहिले कोरियामा अवैध तरिकाले वसेका धेरै नेपाली कामदार छन् भनिन्छ । ती कति छन् र यो प्रणालीमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरुको अवस्था चाहिं के हुन्छ ?
मैले कोरिया सरकारसंग एउटा तथ्याङ्क लिएको थिए । जसअनुसार फेब्रअरी २००७ सम्म नेपाली पासपोर्टधारीको सङ्ख्या ५ हजार ६ सय रहेको छ । जसको ४८ प्रतिशत जति ओभरस्टे छन् । यसमा कामदार, ब्यापारी, बिद्यार्थी, तथा मिसनमा काम गर्ने सवै बर्गका नेपाली पर्छन । यसको मतलव अरु देशका गैरकानुनी वस्दैनन् भन्ने होइन । गैरकानुनी वस्नेहरुमध्येमा नेपालीहरुको प्रतिशत कम छ । नेपाली कामदार नयाँ प्रकृयावाट त्यहाँ जानलागेको अवस्थामा गैरकानुनी कामदारको पनि निर्णय गर्नुपर्नै अवस्था छ । उनीहरुलाई कानुनी प्रकृयामा प्रवेश गराउने अहिले नै कोरिया सरकारको कुनै योजना सुनिएको छैन । तर नेपाल सरकारले उनीहरुको वारेमा पनि विकल्प सोच्नु आबश्यक देखिन्छ । Back